Goverana yako keyboard uye mbeva nemamwe makomputa neSynergy | Linux Vakapindwa muropa
Paunenge uine timu inopfuura imwechete kudiwa kwekushanda pamwe neinopfuura kamwe komputa kunowanzo muka, chero basa rinotora kushanda nekhibhodi yako uye mbeva pakombuta yega yega. Paunenge uri kuhofisi, kubasa, kuchikoro kana kunyangwe kumba iri basa rinogona kunetesa.
Ichi kunyanya nekuti iwe unofanirwa kutamira kune rimwe divi kune mumwe kunyangwe icho chinonyanya kubatsira chingave kuve nemakomputa pamwechete kwete kakawanda izvi zvinogoneka, kunyanya kana zvasvika kune zvakajairika makomputa uye kwete malaptop.
Kunyangwe chinhu chinonyanya kukosha kusanganisa michina neseshini iri kure, izvi zvinosanganisira kuve nekugovana chikamu chechiratidziro chako uye hachiwanzo kuve chakanyanya kunaka kana iwe uine michina iri kure kure.
Apa ndipo panouya chikumbiro kuzotitsigira Ini ndashandisa kwemakore akati wandei uye izvo zvichatibvumidza kugovana keyboard uye mbeva nemakomputa akati wandei panguva imwe chete.
Chirongwa yandiri kutaura nezvayo iSynergy, isoftware iyo inokutendera iwe kugovera keyboard uye mbeva pakati pemakomputa akawanda pasina kudiwa kwechero Hardware. Izvo zvakare zvinokwanisa kugovana clipboard pakati pemakina akasiyana kubva kune mumwe kuenda kune mumwe.
Synergy muchinjikwa-chikuva uye yakavhurwa sosi application, inobvumidzwa pasi peGNU General Public License. Ichi chishandiso chinotipa iyo nzira yekukwanisa kubatanidza mumakomputa anomhanya pane akasiyana mashandiro masystem, akadai seUnix, GNU / Linux, Macintosh uye Windows.
1 Maitiro ekuisa Syngery paLinux?
2 Maitiro ekugadzirisa Synergy?
2.1 Gadzira server
Maitiro ekuisa Syngery paLinux?
Chirongwa yakawanikwa mukati memidziyo yemidziyo ingangove yakawanda, asi nekuti vagadziri vayo vakaita sarudzo yekuganhurira kugoverwa kwemapakeji akaunganidzwa, nzira chete yekuiwana yaive nekubhadhara iyo application.
Izvi zvakakonzera kusagutsikana kwevakawanda, ndosaka kumwe kugovera kuchibvisa pasuru kubva kune avo ekuchengetera.
Chirongwa tinogona kuiwana mahara kubva ku peji yepamutemo yeprojekti, pasi isu tinofanirwa kunyoresa kuitira kuti utore pasuru yakaunganidzwa, pamusoro pekuti vhezheni yacho yainotipa haisiyo ichangoburwa, asi yakagadzikana.
Muchiitiko cheDebian, Ubuntu uye zvigadzirwa zvinotipa isu iko kunyorera kwakanyorwa mune dhi fomati, isu tinongofanirwa kurodha pasi nekumisikidza neyedu inodiwa package package.
Muchiitiko cheFedora, CentOS, Red Hat, yakavhurikaSUSE uye chero kugoverwa kune rutsigiro rpm mapakeji, isu tinogona zvakare kuwana iyo package yatove yakarongedzerwa kuiisa iyo neyedu inodiwa package maneja.
Chekupedzisira, tinokwanisa zvakare kurodha pasi sosi kodhi yekushandisa kuti tiunganidze pakombuta yedu.
Kuti tiite izvi, isu tinovhura terminal uye tinoita inotevera mirairo:
Maitiro ekugadzirisa Synergy?
Kana kumisikidza kwacho kwaitwa pakombuta yedu, tinofanirwa kuitarisa mumenu yekushandisa uye vhura Synergy.
Paunenge uchivhura kekutanga uye kwenguva chete wizard yekumisikidza ichaitwa iri intuitive, zvakanyanya Chirongwa ichi chichatibvunza kana isu tichida kumisikidza muchina uyo watinozoshandisa sevha kana sevatengi.
Seva ndiwo mushini mukuru, iwo unogovana mashandisirwo egonzo uye keyboard pamwe nemamwe makomputa. Izvo zvakare zvinokumbira serial, iyo inopihwa pakunyoresa uye inogona kutariswa muaccount yako.
Iye zvino ivo chete vanofanirwa kumisikidza michina, ivo vanofanirwa kuve neSynergy yakaiswa pane zvese zvishandiso zvinozoshandiswa neiri basa.
Mukati mekutengesa kucharatidzirwa uye pachave nemufananidzo wecomputer uye imwe iri pakati gidhi yerudzi, ndiko kuti gadziriro iri pakati ndiyo sevha uye isu tinongofanirwa kudhonza mufananidzo wechitarisiko kubva kumusoro kodzero yekumiririra vatengi vavanobatanidza.
Zita rechidzitiro rinofanira kugadziridzwa mune mimwe michina mumenu> edit> sarudzo.
Chekupedzisira, iyo server yekomputa inokupa iwe iyo IP iyo inofanirwa kuiswa mukati mevatengi.
Kana iwe uchiziva nezvechimwe chikumbiro chekugovana keyboard uye mbeva, usazeze kuigovana nesu mune zvakataurwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Goverana yako keyboard uye mbeva nemamwe makomputa neSynergy
Iye zvino vanokuchaja: ~ (
Izvo ichiri yemahara, sekutaura kwandakaita iwe unofanirwa kunyoresa uye ivo vanokupa iwe yapfuura vhezheni, iyo yemahara vhezheni ndeye 1.9 nepo parizvino iyo iripo yazvino ndeye 2.10.
Ini ndanyoresa kare uye hazviite kuti utore chikumbiro chinoda mubhadharo wakaenzana.
Zvinoshamisa, ini handina kubhadhara chero chinhu, imwe sarudzo iri kunyora kubva kunobva kodhi, iyo inowanikwa kune wese munhu: https://github.com/symless/synergy-core/wiki/Compiling#Ubuntu_1004_to_1510
** Chishandiso chakanakisa !!!
Kwehafu novices seni ...
1) Dhawunirodha vhezheni ye windows kubva iyi link
2) MuLinux Mint (mune yangu kesi) tsvaga "Synergy" muSoftware Manager
3) Gadzira Server uye Mutengi.
Mune Mutengi isa IP yeiseva (Autocionfig haina kundishandira)
Kuita zvakafanana pakati peWindows michina (kutsvaga basa rangu) ini ndawana "Microsoft Garage: Mouse Pasina Border"
Thanks David nechinyorwa !!!